UXiaomi sele esebenza kwiXiaomi Mi A3 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UEder Ferreño | | Izixhobo ze-Android, Xiaomi
IXiaomi yenye yeempawu ezikhethe i-Android One kwezinye zeefowuni zabo. Inkampani yaseTshayina inoxanduva lweemodeli ezimbini ezilungileyo zokufika ngo-2018 nge Olu hlobo lwenkqubo yokusebenza. Ukongeza ekubeni ngomnye wabo banoxanduva yinike amandla kule nguqulo kunye nesizukulwana sayo sokuqala, esasungulwa ngo-2017. Ifemi sele isebenza kwiXiaomi Mi A3.
Iya kuba sisizukulwana sesithathu kwezi zixhobo nge-Android One. Kuba iinkcukacha zokuqala malunga nesixhobo sokutyikitya sele ziqalisile ukufika. Ke sinokufumana umbono wokuba le Xiaomi Mi A3 iza kusishiya ngantoni.
Enye yeempawu zokuqala zokuvuza kwesi sixhobo bubukho be-NFC. I-NFC iye yafumana ubukho kwi-Android, kwaye isetyenziselwa ukuhlawula iifowuni, nangona inezinto ezininzi ezahlukileyo ezisetyenziswayo. Ngokuyinxalenye kuya kumangalisa, kuba uninzi lweempawu zaseTshayina azihlali zibandakanya eli nqaku kwiifowuni zazo.
Ifowuni ene-codename orchid_sprout ifunyenwe kwi-MIUI 10 firmware. Oku ngekhe kumangalise, ukuba bekungekho kuba zonke iimodeli zebrendi ene-Android One zinamagama ekhowudi efanayo, zihlala zisebenzisa igama ihlumelo. Iyaqondwa ke loo nto yiXiaomi Mi A3 kule meko.
Ngoku, isixhobo esinye sibonwe. Oko kuphakamisa umbuzo wokuba kulo nyaka sifumana ifowuni enye okanye ukuba iimodeli ezimbini zisilindile njengonyaka ophelileyo. Kuya kufuneka silinde ukwazi ukuba iXiaomi Mi A3 ingafika yodwa. Malunga neprosesa, yonke into ibonisa oko ingasebenzisa i-Snapdragon 675, Omnye wookumkani bephakathi.
Kungenzeka ukuba, uphawu luya kulandela isicwangciso esifana nonyaka ophelileyo. Ke, kunokuba kunjalo kude kube lihlobo xa siyazi le Xiaomi Mi A3 ngokusemthethweni. Nangona kunokwenzeka ukuba kwezi nyanga sizakufumana idatha malunga nesi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi sele esebenza kwiXiaomi Mi A3
I-HTC ivala unyaka kwakhona ngeelahleko